कोरोना कहरबीच वाणिज्य बैंकहरुको नाफामा छलाङ्गः ५० अर्ब खुद नाफा, कुन बैंकको अवस्था कस्तो ? - Aathikbazarnews.com कोरोना कहरबीच वाणिज्य बैंकहरुको नाफामा छलाङ्गः ५० अर्ब खुद नाफा, कुन बैंकको अवस्था कस्तो ? -
how to findaprofessional resume writing service creative writing group halifax que quiere decir do your homework en ingles write an essay on louisiana purchase isacv writing service worth it castle creative writing pay to write college essay new year creative writing prompts best essay writer online introduction maker for research paper how to be motivated to do your homework lgbt creative writing prompts creative writing grade 11 descriptive words for creative writing well trained mind forum creative writing write my essay us creative writing frame entry level grant writer cover letter were you doing your homework at 11 yesterday evening resume writing service reviews best mfa creative writing programs reddit ways to start sentences creative writing creative writing about meaning uea ma creative writing fun creative writing tasks doingaliterature review in health and social care online will writing service southend mcc creative writing homework help canada glassdoor how can i help my child with creative writing
गत वर्ष यसै समयमा देश लकडाउनमा थियो । आज पनि देश लकडाउनमा पुनः गएको छ । सबैकुरा ठप्पझै छ । तरपनि, जीवनलाई जोखिममा राखी सेवा दिएर बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले भने लोभलाग्दो प्रगति गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । नेपालमा सञ्चालित २७ वटै वाणिज्य बैंकहरुले सार्वज्निक गरेको वित्तिय विवरण हेर्दा प्रथम भएको छ । नेपालकै पूरानो र ठूलो बैंक नबिल बैंक लिमिटेड, यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह रहेका छन् ।
उनीसंग बैंकमा युवा बैकरहरुको भन्दा फरक पर्दैन । २७ वणिज्य बैंकहरुले कोरोना कहर बीच ५० अर्ब भन्दा बढि खुद नाफा कमाएका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालमा ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पु¥याएर सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा १३.५० प्रतिशतले खुद नाफा कमाएको देखिन्छ ।
२७ वाणिज्य बैंकहरुले चालु आवको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सो अवधिमा बैंकहरुले ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् भने गत आवको सोही अवधिमा ४४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए भन्दा फरक पर्दैन ।
चैत मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंकहरुले ३८ खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४४ खर्ब ९४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुन गत आवको सोही अवधिमो तुलनामा निक्षेप संकलन १३.३७ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २१.१२ प्रतिशत बढी हो भन्दा फरक पर्दैन । २७ वाणिज्य बैंकहरुले ९५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
२१ वटा बैंकले खुद नाफामा वृद्धि गरेका छन् भने ६ वटा बैंकको खुद नाफा घटेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा एनएमबी बैंकको खुद नाफा ८७.८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा १ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ११ करोड ७६ लाख रुपैयाँले थप भइ २ अर्ब ५१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने २ अर्ब २७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ वितरण योग्य मुनाफा आर्जन गरेको छ ।
यसैगरी, बैंकले गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेपतर्फ १८ प्रतिशतले र कर्जा प्रवाहतर्फ २८.१९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ५५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसबाट बैंकले ४ अर्ब ३० करोड ९० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यो वर्ष बैंकले साढे ७८ प्रतिशत बढीले खुद नाफा वृद्धि गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा १ अर्ब १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । जसमा ७८.५७ प्रतिशत वृद्धि गरी १ अर्ब ८० करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न बैंक सफल भएको हो ।
सो अवधिमा ९८ करोड ४६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको छ । यसैगरी, बैंकले गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेप संकलनतर्फ ९.५६ प्रतिशतले र कर्जा प्रवाहतर्फ १६.५५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म १ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब १६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसबाट बैंकले ३ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यो वर्ष बैंकले ६३ प्रतिशत बढीले खुद नाफा वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा १ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । जसमा ६३.०२ प्रतिशत अर्थात् ६३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ थप गरी १ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न बैंक सफल भएको हो ।
सो अवधिमा ९८ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण योग्य मुनाफा आर्जन गरेको छ ।
यसैगरी, बैंकले गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेपतर्फ १०.३२ प्रतिशतले र कर्जा प्रवाहतर्फ १२.१२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म ७३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ६६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसबाट बैंकले १ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यो वर्ष बैंकले ५४.१२ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । बैंकले गत आवको सोही अवधिमा १ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा बैंकको नाफा बढेर २ अर्ब ६ करोड ५२ लाख पुर्याएको छ ।
सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ८३ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । निक्षेप संकलनतर्फ भने बैंकले समीक्षा अवधिमा १ खर्ब ३९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबाट बढाएर चालु आवको सोही अवधिमा १ खर्ब ७२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यसैगरी कर्जाप्रवाहतर्फ भने १ खर्ब २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँबाट बढाएर १ खर्ब ५३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । जसबाट बैंकले ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यो वर्षको उक्त अवधिमा बैंकले ४४.०८ प्रतिशतले खुद नाफा वृद्धि गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा १ अर्ब ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । जसमा ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ थप गरी २ अर्ब १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न बैंक सफल भएको हो ।
सो अवधिमा १ अर्ब ५९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ वितरण योग्य नाफा आर्जन गरेको छ । यसैगरी, बैंकले गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेपतर्फ २७.२२ प्रतिशतले र कर्जा प्रवाहतर्फ ३५.१२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ६३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसबाट बैंकले ३ अर्ब ८३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ४१.६१ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म बैंकले १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले सो अवधिमा निक्षेप संकलन ३९.७८ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब २९ अर्ब पुर्याएको छ ।
त्यसैगरी कर्जा प्रवाह गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४०.१२ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब १४ अर्ब पुर्याएको छ । जसबाट बैंकले २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले खुद नाफा ३९.३९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बैंकले गत आवको चैत मसान्तमा ३६ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा १४ करोड २० लाख रुपैयाँले थप गरी ५० करोड २५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा बैंकले निक्षेप संकलन ४८.२० प्रतिशतले वृद्धि गरी ७७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ३७.९२ प्रतिशतले वृद्धि गरी ८५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । जसबाट बैंकले १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक प्राइम कमर्सियल बैंकले खुद नाफा ३८.७६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । गत आवको चैत मसान्तसम्म बैंकले २ अर्ब ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ७८ करोड ७० लाख रुपैयाँले थप गरी २ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने २ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
यसैगरी, बैंकले गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेप संकलनतर्फ १७.६५ प्रतिशत र कर्जा प्रवाहतर्फ १६.६८ प्रतिशतको वृद्धि गरेको छ । चालु आवको चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ४० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब २८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।जसबाट बैंकले ४ अर्ब ४० करोड ६४ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा बैंकले चालु आवको ९ महिनामा ३५.९५ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा १ अर्ब ४५ करोड १० लाख ९० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा नाफा बढाएर १ अर्ब ९७ करोड २७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
यसैगरी, बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ३३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ३३ अर्ब ३५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा निक्षेप संकलन ४.२७ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २०.३७ प्रतिशत बढी हो । जसबाट बैंकले ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकले खुद नाफा ३३.८७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । गत आवको चैत मसान्तसम्म बैंकले ८७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँले थप गरी १ अर्ब १६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ८५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
यसैगरी, बैंकले गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेप संकलनतर्फ ४.८६ प्रतिशत र कर्जा प्रवाहतर्फ २२.२७ प्रतिशतको वृद्धि गरेको छ । चालु आवको चैत मसान्तसम्म ९६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ९२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत आको सोही अवधिमा बैंकले ९२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ७५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । जसबाट बैंकले २ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा बैंकले चालु आवको ९ महिनामा ३२ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ७० करोड ६२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएकोमा बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको हो ।
सो अवधिमा बैंकले २ खर्ब ४४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब २२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन निक्षेप संकलनतर्फ १५.०६ प्रतिशत र कर्जा प्रवाहतर्फ १७.११ प्रतिशतको वृद्धि हो । जसबाट बैंकले ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दनी गरको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा बैंकले २०.८२ प्रतिशतले खुद नाफा बढाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ९३ करोड ५२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो ।
सो अवधिमा बैंकले १ खर्ब १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ९३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसबाट बैंकले २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यो बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा खुद नाफा ३ अर्ब ४८ लाख रुपैयाँ गर्न सफल भएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २०.०७ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले गत आवको सोही अवधिमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।
सो अवधिमा बैंकले २ खर्ब २७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ४७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन गत आवको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेप संकलन ३६.५५ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ५४.६० प्रतिशत बढी हो । जसबाट बैंकले ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खुद नाफा १८.१८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा १९ करोड रुपैयाँले थप भइ १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ८४ करोड १६ लाख रुपैयाँ वितरण योग्य मुनाफा आर्जन गरेको छ ।
यसैगरी, बैंकले गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेप संकलनतर्फ ८.३८ प्रतिशतले र कर्जा प्रवाहतर्फ १६.२८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसबाट बैंकले २ अर्ब ३५ करोड २६ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खुद नाफा १६.५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ५२ करोड रुपैयाँले थप भई ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ३ अर्ब ८० करोड २४ लाख रुपैयाँ वितरण योग्य मुनाफा आर्जन गरेको छ ।
यसैगरी, बैंकले गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेपतर्फ ९.१९ प्रतिशतले र कर्जा प्रवाहतर्फ २५.७६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म २ खर्ब ८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ८६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसबाट बैंकले ५ अर्ब ९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यो बैंकले चालु आवको ९ महिनामा १४.६७ प्रतिशतले खुद नाफा वृद्धि गरेको छ । गत आर्वको चैत मसान्तमा बैंकले १ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । जसमा चालु आवको सोही अवधिमा २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ थप गरी १ अर्ब ८७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुर्याउन सफल भएको छ ।
सो अवधिमा वितरण योग्य नाफा भने १ अर्ब ४० करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । यसैगरी, बैंकले गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेपतर्फ १४.५० प्रतिशतले र कर्जा प्रवाहतर्फ २५.५५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म १ खर्ब २२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसबाट बैंकले ३ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा खुद नाफा १४.०९ प्रतिशतले बढाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा बैंकले खुद नाफा ३५ करोड १६ लाख रुपैयाँले थप गरी २ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने १ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
यसैगरी, सो अवधिमा बैंकले १ खर्ब ६६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ३५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा निक्षेप संकलन ०.२२ प्रतिशत थप हो भने कर्जा प्रवाह १३.४६ प्रतिशत कम हो । सो अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने ४ अर्ब २९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यो बैंकले चालु आवको ९ महिनामा खुद नाफा १३.३१ प्रतिशतले बढाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा बैंकले खुद नाफा २६ करोड ५६ लाख रुपैयाँले थप गरी २ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
यसैगरी, सो अवधिमा बैंकले १ खर्ब ५१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब २७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा निक्षेप संकलन ७.१२ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २३.८४ प्रतिशत थप भएको हो । जसबाट बैंकले ४ अर्ब ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यो बैंकले चालु आवको ९ महिनामा खुद नाफा १०.६१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा बैंकले १२ करोड ३७ लाख रुपैयाँले खुद नाफा बढाएको हो । बैंकले गत आवको समीक्षा अवधिमा खुद नाफा १ अर्ब १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ गरेको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा यस्तो नाफा बढाएर १ अर्ब २९ करोड ६ लाख पुर्याएको छ । सो अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा भने ८४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म १ खर्ब २५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब १२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा निक्षेप संकलन २०.५६ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २१.६६ प्रतिशत बढी हो । सो अवधिमा बैंकले खुद ब्याज आम्दानी भने ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कमाएको छ ।
बैंकले चालु आवको ९ महिनामा ३ अर्ब रुपैयाँ बढी खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आवको चैत मसान्तमा आर्जन गरेको खुद नाफामा ७.७० प्रतिशतले थप गरी चालु आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो ।
गत आवको चैत मसान्तमा बैंकले ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । सो अवधिमा ३ अर्ब ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ वितरण योग्य मुनाफा आर्जन गरेको छ ।
यसैगरी, बैंकले गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेपतर्फ ४.२५ प्रतिशतले र कर्जा प्रवाहतर्फ ११.०९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म २ खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसबाट बैंकले ६ अर्ब ३४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
बैंकले गत आवको चैत मसान्तमा २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा १.३९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ थप गरी २ अर्ब ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । सो अवधिमा १ अर्ब ४३ करोड १९ लाख रुपैयाँ वितरण योग्य मुनाफा आर्जन गरेको छ ।
यसैगरी, बैंकले गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेपतर्फ १.२१ प्रतिशतले र कर्जा प्रवाहतर्फ १९.७७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ४५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसबाट बैंकले ४ अर्ब ४२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यो बैंकको खुद नाफा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ५.५५ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकले गत आवको चैत समान्तसम्म १ अर्ब १६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
जुन चालु आवको सोही अवधिमा आइपुग्दा ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँले घटेर १ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सो अवधिमा वितरण योग्य नाफा भने ८७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
यसैगरी, बैंकले गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेप संकलनतर्फ ३९.८३ प्रतिशतले र कर्जा प्रवाहतर्फ ३६.२५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म १ खर्ब १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ८८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसबाट बैंकले २ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा चालु आवको ९ महिनामा बैंकको खुद नाफा ३४.३३ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको चैत मसान्तसम्म १ अर्ब ८० करोड खुद नाफा आर्जन गरेको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा यस्तो नाफा जम्मा १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमा सीमित गरेको छ । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ९५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म बैंकले ७८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ६१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा निक्षेप संकलन १७.५० प्रतिशत थोरै हो भने कर्जा प्रवाह १४.९० प्रतिशत थप हो । सो अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने १ अर्ब ८३ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यो बैंकको खुद नाफा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ३८.९१ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकले गत आवको चैत समान्तसम्म १ अर्ब ४३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा आइपुग्दा ५५ करोड ९५ लाख रुपैयाँले घटेर ८७ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ४४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, बैंकले गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेप संकलनतर्फ ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा कर्जा प्रवाहतर्फ भने ८.३९ प्रतिशतले घटाएको छ ।
बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ५५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसबाट बैंकले २ अर्ब ८१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा बैंकको खुद नाफा ३४.३३ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको चैत मसान्तसम्म १ अर्ब ४३ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा यस्तो नाफा ८७ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको छ । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्यनाफा भने ४४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी, बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म बैंकले १ खर्ब १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ९५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा निक्षेप संकलन ८.३९ प्रतिशत थोरै हो भने कर्जा प्रवाह ७.०४ प्रतिशत थप हो । सो अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने १ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा बैंकको खुद नाफा ४४.४५ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको चैत मसान्तसम्म बैंकले २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा १ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ८४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी, बैंकले सो अवधिमा १ खर्ब ३२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब २१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन गत आवको तुलनामा निक्षेप संकलन ५.५७ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह १९.५० प्रतिशत थप हो । बैंकको सो हवधिमा खुद ब्याज आम्दानी भने १ अर्ब ९१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकको खुद नाफा ६०.८९ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकले गत आवको चैत समान्तसम्म ९१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
जुन चालु आवको सोही अवधिमा आइपुग्दा ५५ करोड ७६ लाख रुपैयाँले घटेर ३५ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सो अवधिमा वितरण योग्य नाफा भने २२ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
यसैगरी, बैंकले गत आवको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा निक्षेप संकलनतर्फ ३३.१८ प्रतिशतले र कर्जा प्रवाहतर्फ २६.६८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्म ८६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ७३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसबाट बैंकले १ अर्ब ९१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । सचेत भया ।
(आर्थिक बजार मासिक बैशाख अंकबाट साभार : सम्पादक)
प्रभु, एभरेष्ट र नेपाल बंगलादेश बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, आइतबार कतिमा हुन्छ कारोबार?